🌟🌟🌟 Entrepreneurship Project Management Workshop (Free)🌟🌟🌟
A Group of People Co., Ltd. (AGOP) သည် Design & Fit Out ပြုလုပ်တပ်ဆင်သောCompanyဖြစ်ပြီး လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်လာမည့်လူငယ်များအား ပံ့ပို့ကူညီပေးသော Company လည်းဖြစ်သည်။
Entrepreneurship Project Management Workshop တွင်လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်လာမည့်လူငယ်များတွင် ကြုံတွေနေရသည့်အခက်ခဲပြသာနာများ အား Group Brain storming Section များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Discuss & Presentation များ ပြုလုပ်ခြင်း Group Business Plan များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Opportunity, Risk and Cost Analysis (ORC Analysis) များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Strong, Weakness, Opportunity and Threat Analysis (SWOT Analysis) များ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
- အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်း၏စိန်ခေါ်မှုများ
-စီးပွားရေးmodels များနှင့်အခွင့်အလမ်းများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ( ၄၅ မိနစ်ခန့်)
-အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း နှင့် နောက်တစ်နေ့တွင်ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများအားမိတ်ဆက်ခြင်း။
Group Discussion Presentation များပြုလုပ်ပြီးအရေးကြီးသောမေးခွန်းအချို့အား
Brain Storming Session ပြုလုပ်ပြီးဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်း။ (၄၅ မိနစ်ခန့်)
အုပ်စုတစ်ခုစီမှ Group Presentation များ စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ နှင့်
လေ့ကျင့်ခြင်းများအား Presentation ပြုလုပ်တင်ပြခြင်း(၁၀ မိနစ်ခန့်)
မှတ်ချက်။ ။Workshop သည် Classroom ပုံစံမဟုတ်ဘဲ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်လူကြီးမင်းတို့ထံမှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြသနာနှင့်ပတ်သတ်သည့် မေးခွန်းအချို့ နှင့်Idea အချို့ရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
💭 AGOP နှင့် Partner တစ်ဦးအဖြစ် အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်လိုသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါသလား? 💭
💭 လုပ်ငန်းများအား အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နေသည့် Partner များအား သင်အားကျနေပါသလား? 💭
💭 သင့်တွင် Business idea, Project idea ရှိပြီးအရင်းအနှီးမရှိဖြစ်နေပါသလား?(သို့မဟုတ်) အရင်းအနှီးအနည်းငယ်သာစိုက်ထုတ်ရပြီး Partner လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် စနစ်တကျ လည်ပတ်နေသည့် လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားပါသလား? 💭
💭 မည်သည့်နေရာ တွင်ဖြစ်စေ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ မည်သို့သော စီးပွားရေးအား လုပ်ကိုင်သင့်သည်ကို သိရှိလိုပါသလား? 💭
*** AGOP Company တွင် Management Level (သို့မဟုတ်) Partner လုပ်ငန်း လုပ်လိုတဲ့ လူတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်မယ့်**** # Entrepreneurship Project Management Workshop (Partner လုပ်ငန်း အသစ်/ အကြံညဏ်သစ် များဖော်ထုတ်ခြင်း) Workshop ။
ဒါဆိုရင်တော့ A Group of People Co., Ltd. (AGOP) က free ပေးမဲ့ (Entrepreneurship Project Management Workshop) ကို တက်ကြပါစို့။
✒✒Trainer - Mr. Queck Ser Yong (Managing Director of A.G.O.P. Co., Ltd. and A Former Senior Lecturer at Singapore Polytechnic)
✨ Day 1 :2- June - 2017 (5:30 PM -8:30PM)
✨ Day2:3- June - 2017 (1:00 PM - 4:00 PM)
✨ Day3:4- June - 2017 (10:00 PM -1:00 PM)
💥💥💥သင်တန်းကြေး - Free 💥💥💥
သင်တန်းလိပ်စာ - ဘေလီတံတားအနီး|ဘေလီမှတ်တိုင်|အမှတ် (၄၇)၊ ဇီဇဝါအိမ်ရာ|တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်|ရန်ကုန်။
ဖုန်း - 09263976718 |09970724693 သို့ (အမြန်)စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
💥 လက်ခံမည့်သင်တန်းသားဦးရေ (၁၅) ဦး💥